Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Tsy voatery hidina an-dalambe, hono !
Lasa ahenoana lahateny ataon’ny filohampirenena amin’izao fotoana ny andro ankalazana ny fetim-pirenena (fa tsy fetin’ny fahaleovantena akory). Lasa mikabary sy manararaotra manao fampielezan-kevitra politika ny filohampirenena amin’izao fotoana rehefa migadona ny 26 Jona. Tsy maninona fa izy ihany no hafatotry ny teny nambarany tao anatin’ireny kabary ireny. Isan’izany, ohatra ny filazan’ingahy filoha Rajaonarimampianina ny talata 26 Jona teo, raha nanisy resaka ny raharaham-pirenena izy”. Nandova fahasahiranana sy fahapotehana ny tenany raha vao tafakatra teo amin’ny fitondrana, hoy izy, ary niatrika tranga maro ny fitondrana nadritra ny 4 taona sy tapany.
Mahamenatra , tompoko, raha filohampirenena no hiteny toa izany. Tsy noterena ange ianao nirotsaka nofidiana na novozonana e! Sitra-ponao ny hiroso tamin’izany, ary matoa rersy lahatra ianao nirotsaka nofidiana tamin’ny 2013 dia azo antoka fa ho nanao fanadihadiana lalina, ary ho nahafantatra ny zava-misy miandry anao. Izany rahateo no antony nanaovanao fampielezan-kevitra, satria nahita ny zava-nisy ianao, ka nahita vahaolana mifanadrify amin’izany. Raha tsy nahafantatra mihitsy ny zava-misy teto mantsy ianao, Andriamatoa Filoha, dia tsy ho nitondra fampanantenana maroloha tamin’ny fampielezan-kevitra. Ankoatra izany, lojika koa raha nahafantatra ny toe-draharaha sy ny toerana misy ny firenena Malagasy sy i Madagasikara ary ny fahasahiranana mitambaby amin’ny vahoaka ianao satria nadritra ny 4 taona farany ngarangidina talohan’io fifidianana tamin’ny 2013 io ianao dia minisitry ny vola teto. Noho izany, tsy misy antony nanaovana fanamarihana na fanadiovan-tena hoe “nandova fahasahiranana mafy”.
Dia isan’ny nofaritany koa, noho izany olana nitranga izany, ny hoe “tsy voatery hidina an-dalambe no vahaolan’izany”.
Andriamatoa Filoha ô! Dia azo inoana ve fa tsy mbola nahita vahoaka nidina an-dalambe naneho ny hetahetany ianao na tany ampita tany na tamin’ny tantara tany aloha tany teto amintsika? Tena tsy mahagaga raha niteny ireny Ingahy filoha satria tena nilaozan’ny tantara ve, sanatriavina, sa any amin’ny planeta hafa ankoatry ny tany any?
Tokony tsy hohadinoin’Ingahy Filohampirenena koa fa tsy sanatriavin’ny vava, adala na zazabodo akory ny vahoaka ka ndeha hamono tena, fa matoa izy midina an-dalambe, mitaky zavatra, mampita ny hetahetany, dia satria efa-tapi-dalan-kaleha amin’ny fanehoana ny heviny sy ny fampakarana ny hetahetany any amin’ireo ambaratongan-drafi-pitantanana izy. Efa dingana farany hany hitany fa haazoana antoka ho amin’ny famaliana ny fitakiany ny fidinana andalambe. Hadalan’ny mpitondra ny miziriziry amin’ny fitakiam-bahoaka midina an-dalambe, ary mbola hadalan’ny mpitondra ny tsy misoroka ny fidinan’ny vahoaka andalambe. Raha mpitondra mahay sy mitsinjo lavitra dia mitady ny fomba rehetra anomezana fahafaham-po ny vahoaka na hanazavana ny saim-bahoaka ny zava-misy, dia mba tsy misy nany farafahakeliny no mitranga amin’izany fidinana an-dalambe izany.
Efa famerimberinay fa matoa ny vahoaka midina an-dalambe dia noho izy tofoka sy leon’ny fanakorontanan’ny mpitondra ny fiainany isanandro, mandavan-taona izy, ka rehefa midina an-dalambe izy satria tsy vitan’ny mpitondra ny mandamina izany fikorontanam-piainam-bahoaka mandavan-taona izany, dia efa tonga amin’ny teboka ikarohan’ny vahoaka lalana sy hevitra handaminany ny raharaham-piaraha-moniny izy vahoaka izay. Efa tonga amin’ny teboka itadiavan’izy vahoaka ny lalana handaminany ny raharaham-pireneny izy. Ka diso ny fanakianan-dRajaonarimampianina ny vahoaka raha midina an-dalambe izy fa izy mpitondra no tokony handini-tena rehefa tonga amin’ny fidinana an-dalambe ny vahoaka.